Maxay Shirkaddaadu Lacag Ugu Bixineysaa Maamulka DNS? » Martech Zone
Maxay Shirkaddaadu Lacag Ugu Bixineysaa Maamulka DNS?
Jimco, Nofeembar 20, 2020 Jimco, Nofeembar 20, 2020 Douglas Karr
Waqtiga Akhrinta: 4 daqiiqo
Inta aad maamusho diiwaangelinta domainka ee diiwaangeliyaha domain, had iyo jeer maahan fikrad weyn in la maareeyo meesha iyo sida boggaagu u xalliyo dhammaan waxyaabaha kale ee ay geliso ee DNS si loo xalliyo emaylkaaga, subdomains, host, iwm. yahay iibinta xayeysiisyada, adigoon hubin in boggaagu si dhakhso leh u xallin karo, oo si fudud loo maareeyo, oo uu ku habboon yahay.
Waa maxay Maamulka DNS?
Maareynta DNS waa aalado xakameynaya kooxaha Nidaamka Nidaamka Magaca Nidaamyada. Xogta DNS ayaa sida caadiga ah lagu daadiyaa server-yo fara badan.
Sidee ayuu DNS u shaqeeyaa?
Aynu soo bandhigno tusaalayaal qaabeynta aaggeyga.
Isticmaaluhu wuxuu weydiisanayaa martech.zone biraawsarka. Codsigaas wuxuu aadayaa server-ka DNS kaas oo bixiya wadada loo maro halka codsigaas http lagu hayo server ee magaca server. Kadibna magaca server-ka ayaa la weyddiiyaa oo martigaliyaasha boggeyga waxaa la siiyaa iyadoo la isticmaalayo diiwaanka A ama CNAME. Kadib codsi ayaa loo dirayaa martigaliyaha boggeyga waxaana la siiyaa waddo dib loogu xalliyo biraawsarka.
Qofka isticmaala emails martech.zone ee biraawsarka Codsigaas wuxuu aadayaa server-ka DNS kaas oo bixiya wadada loo maro halka codsiga meylka lagu hayo server ee magaca server. Kadibna magaca server-ka ayaa la weyddiisanayaa oo iimaylkayga martigeliyaha ah ayaa la bixiyaa iyadoo la adeegsanayo rikoodhka MX. Kadib e-maylka ayaa loo dirayaa shirkaddayda martigelinta emaylka waxaana si habboon loogu hagaajiyaa sanduuqa sanduuqa.
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo Maareynta DNS ah oo sameyn kara ama jebin kara urur barnaamijyadani kaa caawinayaan inaad xalliso:
Speed - Sida ugu dhakhsaha badan kaabayaashaaga DNS, sida ugu dhakhsaha badan codsiyada waa loo marin karaa loona xallin karaa. Isticmaalidda aaladda sare ee maareynta DNS waxay kaa caawin kartaa dabeecadaha isticmaalaha iyo aragtida mashiinka raadinta.
maamulka - Waxaad ogaan kartaa in markaad ku cusbooneysiineyso DNS diiwaan-hayaha domain, waxaad heli doontaa jawaab celin caadi ah oo isbeddelada laga yaabo inay saacado qaataan. Isbedelada maareynta DNS Maareynta waa wax dhab ah waqtiga-dhabta ah. Natiijo ahaan, waad yareyn kartaa khatar kasta oo ku imaan karta ururkaaga adoo sugaya xalinta dejinta DNS ee la cusbooneysiiyay.
eryis - Ka waran haddii diiwaan-hayaha diiwaanka ee DNS uu guuldareysto? In kasta oo tani aysan ahayn wax caadi ah, waxay ku dhacday qaar ka mid ah weerarrada caalamiga ah ee DNS. Inta badan aaladaha maareynta DNS waxay leeyihiin awoodo badan oo failover DNS ah kuwaas oo sii wadi kara howlahaaga muhiimka ah ee muhiimka ah iyo sii socoshada haddii ay dhacdo.
ClouDNS: Degdeg ah, Bilaash ah, Amni ah DNS Hosting
ClouDNS waa hogaamiyaha warshadan, oo si dhakhso leh oo amaan ah uhelaya DNS Hosting. Waxay bixiyaan tiro ka mid ah adeegyada DNS oo ka bilaabanaya koontada martigelinta ee bilaashka ah ee loo yaqaan 'DNS martigelinta' dhammaanba iyada oo loo marayo server-yada gaarka loo leeyahay ee DNS ee ururkaaga:
DNS firfircoon - Dynamic DNS waa adeeg DNS ah, kaas oo bixiya ikhtiyaarka lagu beddelayo cinwaanka IP-ga mid ama dhowr diiwaanno DNS ah si otomaatig ah marka cinwaanka IP ee qalabkaaga loo beddelo si firfircoon bixiyaha internetka.
DNS Sare - Secondary DNS wuxuu bixiyaa hab lagu qaybiyo taraafikada 'DNS' ee magac domain ah laba ama ka badan bixiyeyaasha DNS ee wakhtiga ugu fiican ee suurtagalka ah iyo dib-u-soo-celinta hab aad u fudud oo saaxiibtinimo leh. Waxaad ku maamuli kartaa diiwaanka DNS ee magaca domain hal adeeg bixiye keliya (Primary DNS) iyo bixiyaha labaad oo isticmaalaya tiknoolajiyada 'Secondary DNS' waa la hayn karaa ilaa taariikhda oo si toos ah ayaa loo waafajin karaa.
Dib uga noqo DNS - Adeegga 'DNS' ee ay bixiso 'ClouDNS' waa adeeg Premium DNS ah oo loogu talagalay milkiilayaasha shabakadda IP iyo kuwa ka shaqeeya kumana jiraan qorshaha Bilaashka ah. Marti-gelinta Dib-u-celinta DNS waa adeeg heer ganacsi ah waxayna taageertaa labada aag ee IPv4 iyo IPv6 Reverse DNS.
DNSSEC - DNSSEC waa muuqaal ka mid ah Nidaamka Magaca Magaca (DNS) kaas oo xaqiijiya jawaabaha laga raadinayo magac domain. Waxay ka hortagtaa kuwa wax weeraraya inay wax isdaba mariyaan ama sumeeyaan jawaabaha codsiyada DNS. Tiknoolajiyada DNS looma qorsheynin amniga maskaxda. Hal tusaale oo ka mid ah weerar lagu qaado kaabayaasha DNS waa xoqitaanka DNS. Xaaladdaas oo ah weeraryahanku wuxuu afduubaa keydka xalliyaha DNS, taas oo u horseedda dadka isticmaala booqda degel websaydh inay helaan cinwaan IP ah oo aan sax ahayn oo ay u eegaan bogga weerarka xun ee weerrarka halkii ay doonayeen.
Failover DNS - Adeeg bilaash ah oo DNS Failover ah oo ka socda ClouDNS kaas oo ka dhigaya boggagaaga iyo adeegyada shabakada khadka tooska ah haddii ay dhacdo nidaam ama shabakad ka go'an. Isticmaalka 'DNS Failover' waxaad sidoo kale u guuri kartaa taraafikada inta udhaxeysa isku xirnaanta shabakadaha.
DNS la maamulay - Maamulka DNS waa adeeg si buuxda ay u maamusho shirkad xirfadle ah oo martigalinaysa DNS. Adeeg Bixiye DNS ah ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay maareeyaan taraafikada DNS iyaga oo isticmaalaya guddi koontarool ah oo shabakad ku saleysan.
Anycast DNS - Anycast DNS waa fikrad fudud - waad gaari kartaa hal meel oo aad raacdo waddooyin badan oo kala duwan. Halkii ay taraafikada oo dhami hal waddo u mari lahaayeen, Anycast DNS waxay adeegsataa goobo badan oo hela su'aalaha shabakadda, laakiin meelo kala duwan oo juquraafi ah. Ujeedada halkan ayaa ah in shabakadu ay hesho dariiqa ugu gaaban ee adeegsade loogu adeegsan karo server gaar ah oo DNS ah.
Enterprise DNS - Shabakada ClouDNS 'Enterprise DNS waxaa loogu talagalay inay ka shaqeyso malaayiin weydiimo ilbiriqsi kasta. Qaabka qiimeyntoodu kuma salaysna biil weydiinta. Weligaa laguuguma soo dallici doono dusha sare iyo magacyadaada domain weligood ma joojin doonaan shaqada, sababtoo ah xadka weydiinta DNS. Wax lacag ah laguguma soo dalacayo nooc kasta oo daadadka weydiinta ah ee DNS ah.
SSL Certificates - Shahaadooyinka SSL waxay ilaaliyaan macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee macmiilka oo ay ku jiraan furayaasha sirta ah, kaararka deynta, iyo macluumaadka aqoonsiga. Helitaanka shahaadada SSL waa habka ugu fudud ee lagu kordhin karo kalsoonida macaamilkaagu ku qabo ganacsigaaga internetka.
Adeegyada khaaska ah ee DNS - Server-yada gaarka loo leeyahay ee DNS-ka ayaa si buuxda u-cadcad calaamadeysan DNS. Markaad hesho serverka gaarka loo leeyahay ee DNS, wuxuu ku xirnaan doonaa shabakadooda iyo isku xirnaanta websaydhka. Server-ka waxaa maamuli doona oo taageeri doona maamulayaashooda nidaamka waxaadna awood u yeelan doontaa inaad ku maamusho dhammaan boggagaaga adoo adeegsanaya shabakadda 'ClouDNS web interface'.
ClouDNS waa adeeg bixiye DNS ah oo la maareeyay illaa 2010. Hadafkoodu waa inay bixiyaan adeegyada ugu fiican DNS ee meeraha. Waxay si joogto ah u cusbooneysiiyaan oo u ballaariyaan shabakadooda si ay uga sarreeyaan heerarka warshadaha isla markaana u keenaan macaamiisha ROI-ga ugu sarreeya. Kaabayaashooda 'Anycast DNS' waxaa ka mid ah 29 xarumood oo xog kala duwan ah oo ku kala yaal 19 dal oo ku yaal 6 qaaradood.
Ma jiraan waqtiyo aad u tiro badan oo labadiinaba aad lacag dhigan kartaan oo aad kordhin kartaan shaqo la'aanta, xawaaraha iyo isku halaynta guryahaaga internetka - laakiin taasi waa sidaan sameynay. Kaliya samee baaritaanka Goynta DNS oo arag inta shirkadood ee ay ka soo baxeen arrimo la xiriira kalsoonida ay ku qabaan DNS-ka.
Saxiix U Saxeex Lacag Bilaash ah ClouDNS
Xusuusin: Xidhiidhka lagu bixiyay qodobkan ayaa ah isku xiraheena xiriirka.
Tags: rikoodhdaruurahadiiwaanka magacadnsmaaraynta magaca domainmagaca magaca domainMagaca domain xawaarahaxalinta domainkaxawaaraha domainmaamusho dnsdiiwaanka mxserver namexawaaraha goobtaxawaaraha
StitcherAds: Maareynta Xayeysiiska Bulshada, Tijaabinta, Kordhinta, Iyo Shakhsiyeynta